ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အမြင့်ဆုံးရုပ်ပွားတော် Ushiku Daibutsu အား ရေသက်ပါယ်ရန်စိန်ခေါ်မှု - JAPO Japanese News
ကြာ 26 Nov 2020, 14:53 ညနေ
သမိုင်းဆိုင်ရာအရေးအသားတွေထဲမှာဆိုရင် Babel ရဲတိုက်တည်ရှိမှုနှင့်
၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်ပိုင်းကစလို့ ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ပိုမိုမြင့်မားသောအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကိုပိုမိုမြင်တွေ့လာရပြီး ကောင်းကင်သို့ရောက်ရှိရန် မရေမတွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေသကဲ့သို့ပင်ထင်ရပါတယ်။စုစုပေါင်း မီတာ ၁၂၀ အကွာတွင်ရှိသော ဂျပန်ရဲ့ အီဘာရာကီစီရင်စုတွင်တည်ထားကိုးကွယ်တဲ့ Ushiku Daibutsu ဆင်းတုတော်ဟာဆိုရင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရုပ်ထု ၅ ခုအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထားပြီးစီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ လေးကျွန်းစင်္ကြာရပ်‌တော်မူဘုရား၏အမြင့်တော်ထက်ကျော်လွန်ပြီး နောက်တဖန် 2008 ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံမှ နွေဦးဗုဒ္ဓဘုရားကျောင်းထက်လည်းမြင့်မားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာ၏စစ်မှန်စင်ကြယ်သောကျောင်း (ဂျပန်လို J ofdo Shinshū)၊ Shinran ကိုမွေးဖွားရန်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဒီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်အားတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ထုအတွင်းပိုင်းတွင် အထပ်လေးထပ်ပါသောအဆောက်အဦး ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းအဖြစ်အပ်နှံထားသည့်ပြတိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။JōdoShinshū၏နောက်လိုက်များက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဧည့်သည် ၆သိန်း (၆၀၀,၀၀၀) ကျော်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုအနေဖြင့် ရုပ်ထုသန့်ရှင်းရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ကလည်း မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ နှစ် ၃၀ ကျော်တာဝန်ကျေပွန်စွာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည့်အမြင့်သန့်ရှင်းရေးသမား Kazayuki Taguchi ဖြစ်ပါတယ်။
Taguchi ဟာ ထိုဆင်းထုတော်၏မျက်ဝန်းပတ်၀န်းကျင်ကိုနှစ်စဉ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်နေသော်လည်း
ဒီနှစ်မှာ‌တော့ သူနှင့်သူ့နောက်လိုက်က ၁၉၉၂ ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးကတည်းက ပထမဆုံးအနေနှင့် ရုပ်ထု၏ညာဘက်နားကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ယခုနှစ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်မှုအဖြစ်အပျက်များကို CBC TV ထုတ်လုပ်မှုပြပွဲ ‘BACKSTAGE’ မှမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ကွယ်မှလူတစ်ဦးချင်းစီ၏ဘ၀များကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြပွဲအတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်က ၁၅၀ ကီလိုဂရမ်ရှိ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေကို ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့ ထိပ်ကိုသယ်ဆောင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Taguchi နှင့် Minowaတို့ဟာ ရုပ်ထု၏ ရင်တော်အမြင့်ပတ်လည်ရှိဓာတ်လှေကားဖြင့် စတင်တက်ကြပြီး ထိုမှနေ၍ တောင်ထိပ်ကိုခြေလျင်နှင့်ကြိုးဖြင့်တက်ကာ လုပ်ငန်းပြီးအောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိပ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်ကိုစပြီးလုပ်နိုင်တော့မှာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးသည် အချိန်နှင့်အမျှ မြင့်မားသောနေရာမှာ ဖိအားပေးစက်တစ်ချောင်းနှင့်အတူ မျက်လုံးတော်နှင့်နားတော်တို့မှ ဖုန်နှင့်ငှက်ချေးများကိုဖယ်ရှားရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကြေးနီသည်အရောင်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အရောင်တောက်တောက်နှင့်ဓာတ်ပြုခြင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောပွတ်တိုက်အားနှင့်ဆပ်ပြာအားပြုသည့်အခါ Taguchi နှင့် Minowa တို့နှစ်ယောက် ရေနှင့်အလင်းဖိအားများဖြင့်သတ္တု၏သွင်ပြင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဂရုတစိုက်အလုပ်လုပ်ကြရပါတယ်။
ယခုနှစ်တွင်အသက် ၅၀ ပြည့်သူ Taguchi က “ ဒီလုပ်ငန်းဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုပြီးခက်ခဲလာတယ်။
ကျွန်တော်တို့အခုလိုထိပ်ကိုရောက်ဖို့ခရီးစဉ် ၄ ခုကိုသွားရမယ်။ ”မြေပြင်မှကြည့်လျှင်တော့ သူတို့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဂရုစိုက်မှုတို့ဖြင့်ကြီးမားသောလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတာကိုအလွယ်တကူသတိမမူမိနိုင်ပါဘူး။
Ushiku ဗုဒ္ဓကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် BACKSTAGE ၏သတင်းပေးပို့ချက်အတွက်မဟုတ်လျှင် မိမိတို့၏အလုပ်ထဲသို့အပ်နှံခြင်းနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်အရာဖြစ်နေဦးမှာပါ။
Pop-up book ကဲ့သို့ ပန်းအိုးလေးများ !!!!
ဂျပန်ရဲ့တီဗွီအစီအစဥ်မှာ လုပ်ကြံသတင်းတွေတောင်ရှိလာပါပြီ ?!!